प्रोटेस्टेन्ट सुधार (Protestant Reformation) | Nepali Christians
August 11, 2014 1:30 pm by: Admin Category: Sermons A+ / A-
वर्षहरू बित्दैजाँदा म ण्डली आफ्नो बलियो जगबाट हट्न थाल्यो। मानिसहरू परमेश्वरको वचन बाइबललाई ध्यान दिनुको सट्टामा उनीहरू मानिसका कुराहरूमा ध्यान दिन थाले। ख्रीष्टको नेतृत्व र प्रभुत्वलाई त्यागेर उनीहरू मानवीय धार्मिक नेताहरूलाई पछयाउन थाले। आफूलाई ख्रीष्टियन हुँ भन्ने कतिपय मानिसहरू वास्तवमा साँचो ख्रीष्टियन थिएनन् (२ तिमोथी २:१९)। बप्‍तिस्मा लिने कतिपय मानिसहरू वास्तवमा मुक्ति नै पाएका थिएनन्। यसको परिणामस्वरुप मण्डली बेमेल मिश्रणले भरियो। जुन कुराहरू झूटा र संसारिक थिए ती कुराहरू सत्य र इश्वरीय कुराहरूसँग मिसिन थाले:
प्रोटेस्टेन्ट सुधार (Protestant Reformation) Reviewed by Admin on Aug 11 . पेन्टेकोस्टको दिनमा मण्डलीको जन्म भयो (पाठ ९)! शुरू-शुरूमा मण्डली ख्रीष्टको अधीनमै, उहाँकै प्रभुत्वमुनि थियो। साथै मण्डली एउटा बलियो जगमाथि खडा थियो: वर्षहरू बि पेन्टेकोस्टको दिनमा मण्डलीको जन्म भयो (पाठ ९)! शुरू-शुरूमा मण्डली ख्रीष्टको अधीनमै, उहाँकै प्रभुत्वमुनि थियो। साथै मण्डली एउटा बलियो जगमाथि खडा थियो: वर्षहरू बि Rating: 0
पादरी गंगाप्रसाद प्रधानको जीवनी, कृ...बप्‍तिस्मा दिने ठीक तरिका कुन हो?...